जगन्‍नाथजीले देशको आवश्यकता बुझ्नुभएन, उहाँको उमेदवारीले असर गर्दैन : रेणु दाहाल - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
मङ्गलवार, वैशाख २० २०७९
भरतपुर महानगरपालिका मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेणु दाहाल यति बेला चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । सत्ता गठबन्धनका दलबाट साझा उम्मेदवार बनेकी उनी जनतामा एक पटक परीक्षण भइसकेकी जनप्रतिनिधि हुन् । चुनावी तयारीको सन्दर्भमा रहेर न्युज कारखानाकर्मी कुलप्रसाद काफ्लेले मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालसँग गरेको कुराकानी
-जनतामा जाँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । जनतामा उत्साह छ । विकासका लागि रेणु दाहाल भन्ने छ । ठुला आयोजनालाई निरन्तरता दिन र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि रेणु दाहालको विकल्प छैन । उहाँबाहेक अरूले गर्न सक्दैन भन्ने आम महानगरबासीको बुझाइ छ । जनस्तरमा मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो उत्साह पाएको छु ।
२. पहिलो कार्यकालमा के गर्न सक्नुभएन र फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा उम्मेदवारी दिनुपर्‍यो ?
–पहिलो कार्यकालमा नसकेको भन्ने होइन । दीर्घकालीन सोचका साथ भरतपुरको विकास र समृद्धिका लागि हामीले जग तयार गर्‍यौँ । अब यसलाई पूर्णता दिनका लागि अब एक कार्यकाल चाहियो । जसले बच्चा जन्माउँछ, बच्चाको माया आमालाई जति त हुँदैन नि । जति पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढेका छन् । जस्तो, नारायणी तटबन्धको पाँच अर्बको आयोजना छ । त्यसलाई सुरुवात हामीले गर्‍यौँ । अब सम्पन्न गर्नु छ ।
नारायणी तटबन्ध भरतपुरवासीको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय थियो । वर्षेनि बाढीका कारण हुने धनजनको क्षति हुने गर्थ्यो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोजना अगाडि बढेको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई पूरा गर्नु छ । ठुला सडक र पूर्वाधार बनेका छन् । ६ र ४ लेनका सडक बन्दै छन् । महानगरीय चक्रपथ योजना छ । यी सबै योजना पूरा गर्नु छ । नारायणी नदीलाई ‘सी बिच’ मोडलको रूपमा विकास गर्नु छ ।
महानगरको आफ्नै प्रशासकीय भवन भर्खर शिलान्यास गरेका छौँ । महानगरपालिकाले अघि सारेका थुप्रै नीतिगत काम अधूरा छन् । अधूरा रहेका काम सम्पन्न गर्ने दायित्व छ । भरतपुरको भविष्य र जनताको अपेक्षालाई हेरेर पनि अब एक पटक कार्यकाल भयो भने यी सबै काम गर्न सक्थेँ । भरतपुरलाई हेर्न र गर्व गर्न लायक बनाउने भनेर उम्मेदवारी दिए । मलाई व्यक्तिगत रूपमा रहर त थिए । तर, समग्र आवश्यकतालाई बुझेर मेयरका लागि दोस्रो पटक पनि उम्मेदवारी दिएको छु ।
३. प्रचण्डकी छोरी भएकैले तपाईँले धेरै अवसर पाएको भन्ने गर्छन् नि । यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
–प्रचण्डकी छोरी भएर मैले केही अवसर पाएको छैन । मैले दुःख मात्रै गरेको छु । व्यक्तिगत इच्छा, चाहना छाडेको छु । हिजो पनि १० कक्षा पढ्दा पढ्दै कापी किताब फालेर मुलुक परिवर्तनका लागि सङ्घर्षमा होमिएकी हुँ । त्यस बेलादेखि आजसम्म लगभग २७ वर्ष भयो, म निरन्तर जनताको सेवामा छु । जनयुद्धमा बाँचेर आएको छु, मर्न पनि सकिन्थ्यो ।
पार्टीको जिम्मेवारी लिएर कहिले रोल्पा त कहिले भारत पुगे । यहाँ मेयरमा लड्नुअघि काठमाडौँमा पार्टीको सेक्रेटरी थिए । अहिले चितवनमा पार्टीको इन्चार्जका रूपमा छु । मेयरका रूपमा एकचोटी परीक्षण पनि भएँ । जनताका पक्षमा कति काम गर्न सकेँ छर्लङ्ग देखिएको छ । जनताका हरेक सवाल शिर ठाडो बनाएर जवाफ दिन सक्छु । यसमा मलाई गर्व छ । प्रचण्डकी छोरी भएर राष्ट्रको लागि देन मात्रै गरेको छु । आफ्नो लाभको लागि गरेको छैन ।
४. गठबन्धनकै दलमध्येको काँग्रेसको असन्तुष्ट पक्षबाट जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यसले गठबन्धनलाई कति प्रभाव पार्ला ?
–खासै प्रभाव पार्लाजस्ताे मलाई लागेको छैन । किनकि गठबन्धनका दलको साझा उम्मेदवारका रूपमा मेयरको आधिकारी उम्मेदवार म नै हो । काँग्रेसका केन्द्रीय नेता, प्रधानमन्त्री एवं सभापतिदेखि लिएर शीर्षस्थ सबै नेताले उहाँ (पौडेल)लाई फिर्ताको लागि आग्रह गर्नुभयो । पार्टीले गरेको आग्रहलाई पनि जगन्नाथजीले स्वीकार गर्नुभएन । उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ । देशभर अन्यत्र पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा खेरी कस्तो भयो भनेर इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पार्टीको सर्लक्कै मत जान्छ भन्ने लागेको छैन । दोस्रो कुरा यो गठबन्धन कुनै दल विशेष होइन । राष्ट्रको भविष्यलाई हेरेर, आवश्यकतालाई बुझेर, संविधान र उपलब्धिका पक्षधर मिलेर गठबन्धन बनेको छ । जनयुद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि आएका हामी सहयात्री पार्टीबिच गठबन्धन भएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा राज्य पक्षबाट प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्थ्यो । हामीहरू यहाँसम्म आएका छौँ । संविधान जारी गर्‍यौँ । यी सबै परिवर्तनका हिमायती हामी हौँ । परिवर्तनको विरोधी राप्रपालाई बोकेर एमाले हिँडिरहेको छ ।
गणतन्त्र, सङ्घीयता र परिवर्तनका विरोधी अर्को खेमामा छन् । हामी अग्रगामी पक्षधर यता छौँ । जगन्नाथजीले यी सबै विषयवस्तु, देशको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्नुभएन कि जस्तो लाग्छ ।
यो दूरगामी महत्त्वलाई बुझेर पाँच दलीय गठबन्धनको साझा दृष्टिकोणसहित देश अघि बढेको छ । उहाँले बुझ्न सक्नुभएन कि भन्ने ठान्छु । उहाँलाई पार्टी (काँग्रेस) ले कारबाही गरिसकेको पनि छ । उहाँ काँग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार होइन । स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा त्यति धेरै असर गर्छ जस्ताे लागेको छैन ।
५. गठबन्धन दलविरुद्ध एमाले र राप्रपाबीच पनि तालमेल भएको छ । तपाईँलाई भारी पर्ला नि ?
-एमाले र राप्रपा तालमेल प्राकृतिक छैन । अप्राकृतिक खालको छ । एउटा वाम पार्टी र गैर वाम पार्टी, त्यो पनि गणतन्त्र र परिवर्तन विरोधी ।
धर्मनिरपेक्षको विरोधी र हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तिसँग एमालेले तालमेल गरेको छ । त्यसले गर्दा खेरी उहाँको हिजोका गतिविधिले गर्दा पनि । सम्मानित संसद् दुई-दुई चोटि विघटन गर्ने र संसद्को गला रेट्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि खोस्ने काम केपी ओलीबाट भयो । एकलौटी र निरकुंश ढङ्गबाट उहाँ अघि बढ्नुभयो ।
देशलाई स्थायित्व दिन भनेर बनाइएको पार्टी उहाँले छिनभरमै टुक्रा-टुक्रा भयो । नेकपाको दुई तिहाइको सरकार, ठुलो पार्टी क्षतविक्षत भयो । तत्कालीन एमाले पनि विभाजन भएर त्यहाँ भएका शीर्षस्थ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू एमालेमा रहन सक्ने अवस्था भएन । एउटा व्यक्तिको गलत कार्यशैलीले गर्दा दुई तिहाइको सरकार गुम्यो, प्रदेश सरकार गुमे । अझै पनि यस्तो अप्राकृतिक गठ जोड गरेर उहाँ अघि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
६. सडक मात्रै कालोपत्रे गरेर विकास भएको भन्न नमिल्ने कुरा आइएका छन् नि । तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
-भरतपुर महानगरमा सडक कालोपत्रे मात्रै भयो र ? पाँच वर्षमा भरतपुर महानगरको बजेट कति र हाम्रो सक्रिय पहलमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट कति आयो भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै छौँ । थुप्रै आयोजना अघि बढेका छन् । सडकमा उल्लेखनीय प्रगति छ । पाँच वर्षमा ६२२ किमी सडक पिच भएको छ ।
चौकी डाँडादेखि गोला घाटसम्म खानेपानीको सुनिश्चितता भएको छ । झन्डै पौने चार अर्बका खानेपानी आयोजना अगाडि बढाएका छौँ । शारदा नगर खानेपानी आयोजना मात्रै ५१ करोडको छ । दिव्यनगर खानेपानी आयोजना २१ करोडको छ । जखडीमाई खानेपानी आयोजना ३७ करोडको छ । यो पाँच वर्षमा हामीले सात हजार विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा बढाएका छौँ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तर बढाएका छौँ । नगर स्तरीय पार्क बनाएका छौँ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि महानगर, सङ्घ र प्रदेशले विभिन्न स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेका छन् । दूधमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ अनुदान दिएका छौँ । आजसम्म कुनै सरकारले यस्तो गरेको छैन । हामीले सुरुवात गर्‍यौँ । विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने भनेर कृषिमा व्याज अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ ।
भरतपुर दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको छ । महानगरलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छौँ । यी सबै योजनालाई हेर्दा सडक मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सिटी’को परिकल्पना अनुसार अघि बढेका छौँ । भरतपुरलाई उज्यालो सहरका रूपमा विकास गर्न झन्डै ८० किमी सडकमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेका छन् ।
भरतपुरको मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्छ, अन्य पालिकामा तालमेल हुन्छ : चितवन कांग्रेस सभापति
पुरुषप्रधान सोचका मान्छेहरूसँग लड्न अत्यन्तै अप्ठेरो छ- उर्मिला थपलिया